အိုးနိုးနိုး နိုး !!!! မျက်လုံး ပြူးလောက်အောင် ဘရာ ဆက်ဆီ ကျလွန်း တဲ့ စစ်ပိုးအိမ် ရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်များ – Shwe Yoe
အိုးနိုးနိုး နိုး !!!! မျက်လုံး ပြူးလောက်အောင် ဘရာ ဆက်ဆီ ကျလွန်း တဲ့ စစ်ပိုးအိမ် ရဲ့ အမိုက် စား ပုံရိပ်များ
ပရိသတ်ကြီးရေ Lady Boy တွေထဲမှာလည်း အမျိုးသမီးတွေ အရှုံးပေးရလောက်အောင် ချောပလှပတဲ့ သူလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ သက်သေပြသွားခဲ့တဲ့သူလေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ နာမည်ကြီးLady Boyတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်စစ်ပိုးအိမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်း ရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူမ ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေစစတွေ့ချင်းမှာ မိန်းကလေးအစစ်တစ်ယောက်လားလို့တောင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို လူမှု ကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံးတင်လေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ညနေခင်းအလှတရားတွေနဲ့ အပြိုင် ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အမိုက်စား အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ထားတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေကိုသူမရဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံလေးထဲမှာ ပိုးတစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးရဲ့ ဆက်ဆီ ကျလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လှတရားတွေကလည်း မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် မကြာခဏ ဖော်ပြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်လည်း ပိုးကို ဆက်လက် အားပေးလိုက်ပါအုံးနော်။
သူမရဲ့ ရင်သားအလှကို ထင်းလင်းစွာပြလိုက်တဲ့ မမသင်ဇာ ရဲ့ အကြမ်းစားပုံများ